काठमाडौंमा सशक्त आन्दोलन गर्छौं : पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले काठमाडौंमा सशक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने तयारी भएको बताएका छन् । आजको स्थायी कमिटी बैठकपछि पाण्डेले बाहिर कार्यक्रम ...
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक : आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक सकिएको छ । बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको संघर्षका कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा भएको स्थायी कमिटी सदस्य लीलामण...
प्रचण्ड- माधव समूह बैठक : आन्दोलन थप सशक्त बनाउने निर्णय
sajhapost.com . ६ दिन अघि
काठमाडाैं, १ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव नेपाल समुहले आन्दोलन सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा विहिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले देशको संघ...
ekantipur.com . ६ दिन अघि
काठमाडौँ — नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक कोटेश्वर पेरिसडाँडामा जारी छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि सांगठनिक रुपमा नेकपाको केपी ओली समूह आक्रमक रुपमा देखिएपछि दाहा...
प्रचण्ड-नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी : मौसम तातो हुँदै जाँदा आन्दोलन पनि तात्दै जान्छ !
विभाजित नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले जाडो कम हुँदै जाने र आन्दोलनको ताप बढ्दै जाने निष्कर्ष निकालेको छ । बिहीवार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अहिलेसम्...
नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले आन्दोलन अझ चर्काउने
nepalsamaya.com . ६ दिन अघि
काठमाडौं– नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिभिसभा विघटनविरुद्ध जारी आन्दोलनको समीक्षा गर्दै थप कार्यक्रम तय गर्न छलफल गरेको छ। बैठकपछि स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले बैठकको मूल ...
‘प्रधानमन्त्रीको साथमा गाली रुचाउने कार्यकर्ताबाहेक कोही छैनन्’
Ujyaaloonline.com . ६ दिन अघि
काठमाण्डाै – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीकाे केन्द्रीय कार्यालय पे...
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सकियो
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक सकिएको छ । पेरिसडाँडामा ३ बजेपछि बसेको बैठक भर्खरै सकिएको हो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपाले प्रति...
रघुजी पन्त भन्छन्- आन्दोलनको ताप चढ्दै जान्छ
काठमाडौं । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा जनता विस्तारै सडकमा आउने बताएका छन् । स्थायी कमिटी बैठकबारे जानरकी दिँदै उनले भने, "पार्टीविशेषको आन्दोलन होइन । ...
दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार बस्ने
काठमाडौं– नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जारी आन्दोलनलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तका अनुसार स्थायी क...
नेकपाको आन्दोलन कमजोर भएकै हो ? खनाल भन्छन्- रिभ्यु गर्दै छौं
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई संसद् विघटनविरूद्धको आन्दोलनको कमान्डर बनाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘खुट्टी देख्दै थाहा भयो’ भन्दै टिप्पणी गरे...